DOOD QARAN XI (qaybtii kow iyo tabnaad) | Qaranimo Online
DOOD QARAN XI (qaybtii kow iyo tabnaad)
September 14, 2012 | Filed under: Warka Maanta | Posted by: QOL Admin Cabdulqaadir Aaden Mohamuud “Jangeli”
Qore: Cabdulqaadir Aaden Mohamuud “Jangeli” | Akhriste qaab qoraalkaan waxuu u sameysanyahay sidii riwaayad haseyeeshee wuxu ku saleysanyahay dood qaran oo muujineysa xaaladdaa Soomaaliya, wuxuuna ka koobanyahy qyebo taxane ah oo labo ama saddex bog ku soo baxaya marwalba. Magacyada aad halkaan ka akhriyidoontid qaarkood waa sarbeeb ka soo jeeda magac qof jira.
Soomaalida oo muddo dheer Ilaahy baryeysay in qof khayr-qaba uu abta hogaanka madaxnimada Soomaaliya, ayaa waxaa muuqata ifafaale Ilaahay ku aqbalay ducadii. Ilaahay wuxu qur’aankiisa kariim-ka ah ku yiri” Ibbarya waan idinka aqbalayaaye”. Hadaba waxaan la rajeynayaa in madaxweynaha cusub Xassan Shiikh Maxamuud usan sidii kuwii hore oo kale u dhaqmin ee uu marka hore magacaabo ra’isul wasaare kartid iyo hufnaan leh oo dhisikara wasiiro aan badneyn oo ayana karti iyo aqoon lagu xulay ee aan qabiil lagu xulin. Diiriye Hingo oo ka gaabsaday in uu odoroso doorashadii maxaweynaha cidda ku soo baxaysay maxaayeelay siyaasadda Soomaaliya oo aan la odorosikarin, isna badbadasha maalinta labadeeda gelin ayuu ka xishooday in uu ku guuldarreysto odorskiisa. Haatan oo ay caddatay dorashadii ayaa asaga iyo saaxiibadiis isugu yimaadeen gurigii Bile iyo Suuban si ay uga faaloodaan doorashadii iyo mustaqbilka Soomaaliya iyo hogganka cusub.
DIIRIYE HINGO: Suuban walaaley shaahagu macaana mantay! Waxaan islahaa mar hadii laga tegay Suuban oo ay xildhibaanimadii ay wayday, shah idiin Karin-meyso oo waa xanaaqsantahay lakiin kanu shaahaaagii horaba ka fiican, ee see wax u jiraan?
SUUBAN: Diiriye Hingo, ma maqashay Suldaan laan gaab ah, shiikh laandheera ah baa ii dhaama? Xildhibaan aan dowlad lahayn qof caadi ah oo dowlad leh baa dhaama. Askarta Kenya ayaa maalinwalba dariiqa nogu ceyrsata, xildhibaanna ma rabo haddaan qaran iyo dowlad Soomaali ah oo hagaagsan helaayo, ee Ilahay waxaan ka baryayaa in dhulkeygii oo nabad ah dowlad hawlkar- ahna ka shaqeyneyso mar indhaha ii saaro.
DR. MUKHTAAR: Horta yaa horay u yaqaanay madaxweynaha cusub?
BILE: Waa laguu yaqaanaa! Annaga ayaa isku hay’ad sama-fal ah ka wada shaqeynjirany. Waa dhawayd baa asaga iyo dhalinyaro kale xisbi sameeyeen ay ku doonayeen isbadal xaaladda murugsan ee Soomaaliya. Xisbigiisi baa soo sharraxay in uu u tartamo madaxwaynaha Soomaaliya. Waxaanna u maleynayaa farac islaax ka tirsan in xubna sare ee xisbigiisu ka soo jeedaan. Diiriye Hingo ayaa baaris waayahaa sameynayaye bal ha noosheego waxa uu ka ogyahay.
DIIRIYE HINGO: Waa nin fiican ma ku deynaa oo ma odorsnaa qofka uu ka dhigayo ra’iisul wasaare?
CABDULLAHI: Magaca intaanaan sheegin maadaama aan isku raacnay in uu madaxweynuhu yahay nin fiican Ilahyna ka rajeynayno in uu noo fiicnaado, ma sheegnaa astaamaha ra’iisul wasaaraha aan u baahannahay?
SUUBAN: Haa ee Abdullahi adigu soo jeedi.
CABDULLAHI: Qof aftahan ah oo wanaaga dadka ka dhaadhicinkara, qof dib u heshiisiinta iyo soo dhaweynta kooxa dagalamaya abaari kara, qof caddalaada iyo sinnanta aad u jecel, qof dadkiisa iyo dalkiisa u daacad ah oo aan ka gabban mudanka ummadda Soomaaliyeed leedahay, qof xorriyada saxaafadda wax tarkeeda fahmaya, qof islaanimo iyo bin-aadnimo dirtood ka xishooda xaaraanta iyo xoolaha ummadda, qof geed dheer iyo geed gaaban-ba u fuula isu keenka ummudda Soomaalida, qof ka digtoonaada qaladyadii madaxdii hore galeen, qof ciidan Soomaaliyeed oo hanta waajibaadka dalkood dhisa, qof shaqa abuurka iyo dhaqancelinta dhaliyarada aysan marne miskaxdiisa ka bixin.
DR. MUKHTAAR: Oo qofkaas xagee laga helayaa, maasagaa weli noo dhashay?
BILE: Anigu kelmadda qofka ayaan la yaabay ee maad nin tiraahid Cabdullahiyow.
SUUBAN: Bile ma adigii aan islahaa ragga waa ugu roonyahay baa saasleh. Qofka in uu yiraahdo Cabdullahi waa ku saxsanyahy maxaajira gabarna waa noqon kartaa ra’iisul wasaaraha.
CABDULLAHI: Su’aashii Dr. Mukhtaar ee ahayd xegge laga helayaa qof astaamahaas leh: Inkasta oo qof dhameystiran aan la helikarin hadana waa la helikaraa qof inta badan astaahaas leh.
DIIRIYE HINGO: Hal reer ayaa laga helikaraa qof astamahaas leh, waana reerka aan ka dhashay. Haddi Madaxweynaha cusubi uu caqli leeyahay waa in uu san meel fog ka raadin oo qabiilka kore iska daaye qoyskayaga ayaa 10 noocaas ah laga helikara.
CABDULLAHI: Mushkilada Soomaalida haysata oo dhani waa midaas Diiriye Hingo ka dhawaajiyanayo oo kale . War Soomaaliya iska daaye addunka oo dhan baan laga helikarin qof astaamahaas oo wada dhan leh, markaasaad qoyskiina noogu sheekeyneysaa in uu toban leeyahay.
SUUBAN: Horta madaxweynaha waa la wareerinayaa oo qabiil hebel baa badan ama caado u lahaa in ay qaatan mid ka mid ah saddexda jago oo dowladda ugu sarreysa. Marka haadi uu dhegeysto madaxweynuhu ama aamino arrimaha noocaas ah dhibaato wayn buu la kulmayaa, isbadalkii la raadinayeyna ma dhicidoonto. Is qabqabsigii marwalba madaxweyna iyo ra’iisul wasaaraha dhexmarijiray waxaa ugu wacnaa ayada oo ra’iisul wasarayaashu aaminsanaayeen in uu qabiil iyo laandheere-nimo ku yimid.
DIIRIYE HINGO: Ma waxaad isgu shekeyneysaan in aan madaxaweynuhu qabiil tixgelin. Waad riyooneysaan ee khasab weeye in uu qabiilkayaga u magacaabo ra’iisul wasaaraha. Ninka reerkayaga ugu liitaa waa ka fiicanyahay ninkasta oo reerkale ah maxaajira wuxuu ku tiirsanyahay qabiil wayn, kan kalese casarkii baa la diiranayaa.
CABDULLAHI: Anigu waxaan ku talinayaa in aan madaxweynuhu uusan tixgelin arrintaas Diiriye Hingo sheegay ee qabiilka ah. Waxaan ka rajayneynaa madaxwaynahu sidii uu baarlamaanka hortiisa ka sheegay markii uu is-sharraxayey in qof karti, hufnaan iyo aqoon dheeraad ah leh loo magacaabo ra’iisul wasaraha oo aan qabiilna loo tixgelin.
Qore: Cabdulqaadir Aaden Mohamuud “Jangeli” | jangelione@yahoo.com
Other Interesting posts:Madaxweyne Shariif "Baarlamaan labo Gudoomiye...Siyaasiga Faarax Dooxa-joog oo ka Hadlay Xukunkii ...Kulan looga hadlayay Amniga Muqdihso oo maanta ka ...British Somalis going back for a futureGuuto ciidamada AMISOM oo qarax lagula eegtay Muqd...Wasiirka Amniga oo u digay Musharixiinta!Marwada Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya oo Casho Sha...Kenya:Country in a dilemmaGeelloow: horumarin af mise horseed aafo?! Q1AADAU REVIEW TEAM AND SRCC PhotographsAl-Shabab jihadist more whiner than martyr: Former...RW Saacid oo gaaray magaalada BeledweyneSocialize	Posted by QOL Admin on September 14, 2012. Filed under Warka Maanta.